မြရဲ့ကမ္ဘာ - Random of NangNyi
Home essay မြရဲ့ကမ္ဘာ
by NangNyi 4:51 PM
အိပ်မက်ထဲမှာ ကိုကိုက အော်ငေါက်လိုက်ဖို့ ပြင်နေချိန်တွင် မြသည် သူ့ကိုယ်သူ အိပ်မက်မှ နှိုးပစ်လိုက်၏.. ကမန်းကတမ်း ရေထသောက်ရင်း ကိုကို၏ ဒေါသမျက်လုံးတို့ကို ပြန်မြင်ယောင်မိကာ ကြက်သီးများပင် ထလာသဖြင့် ပုခုံးကို တွန့်ခါပစ်လိုက်မိသေးသည်.. အိပ်မက်ကနေ အချိန်မှီနိုးအောင် ထလာနိုင်သည်က ကံကောင်းလို့ပင်.. ဆိုးဝါးသော အိပ်မက်များကို မက်ခါနီးတိုင်း မြသည် ကိုယ့်ကိုကိုယ် နိုးလာအောင် နှိုးတတ်သည်မှာ ထူးသော ကုသိုလ်ကံဖြစ်ချေ၏.. ဒါပေမယ့်လည်း ကိုကို့ ဒေါသတွေကတော့ အိပ်မက်မှ နိုးလာရုံဖြင့် ပြီးဆုံးသွားမည့် အရာများ မဟုတ်ခဲ့ပါ..
မြသည် ကိုကို့ ဒေါသတို့ကို အင်မတန်ကြောက်ရွံ့မိသူဖြစ်သည်.. မျက်မှောင်ကုပ်၍ ကြည့်လိုက်လျှင်ပင် စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်း၍မဆုံးတော့ကာ အားငယ်လာသည်.. ကိုကို့လေသံမာလာကာ စကားအသုံးအနှုန်းများ ရင့်လာလျှင် မြ မျက်ရည်ဝဲတော့သည်.. ဘယ်လိုကံမျိုးဖန်လာသည်လဲတော့မသိ.. ကိုကို ဒေါသထွက်အောင်တော့ မြ ခဏခဏ လုပ်မိတတ်သည်.. မြ၏ မသိဆိုးရွားမှုများကြောင့်သာမက ကိုကို ကိုယ်တိုင်ကလည်း အကဲဆတ် စိတ်တိုလွယ်သူဖြစ်လေတော့ မြသည် ကိုကို့ကို မကြာခဏ ချော့မော့တောင်းပန်ရလေ့ရှိသည်.. မကြာခဏ ငိုယိုရတတ်သည်.. မကြာခဏ စိတ်ထိခိုက် ဝမ်းနည်းရတတ်သည်.. သို့သော်လည်း မြသည် အမှတ်လည်းမရှိသူဖြစ်လေသလား.. မကြာခင်မှာပင် ကိုကို့ မျက်နှာကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း ကြည်နူးပျော်ရွှင်နေမြဲပင်..
မြသည် လူတကာ၏ တန်ဖိုးထား အလိုလိုက်မှုကို ခံယူကာ မသိတတ်ခြင်းခပ်များများဖြင့် တကိုယ်ကောင်းဆန်စွာ ကြီးပြင်းလာခဲ့သူဖြစ်သည်.. ကိုကို ဒါတွေကိုမသိ.. ကိုကို့အပေါ်မှာ အလိုက်သိ ပြုစုယုယတတ်ခြင်းများကို ကိုကို မသာယာတတ်ချေ.. ဘာမဆို ကိုကို့သဘောကျ အလျော့ပေးတတ်ခြင်းကို ကိုကို မလိုလား.. သို့သော် မြ သဘောထားအတိုင်း ပြုမူပြောဆိုပြန်လျှင်လည်း ကန့်လန့်တိုက်သည်ရယ်လို့ ကိုကို စိတ်တိုပြန်ချေသည်.. လက်တွေ့သိပ်ဆန်ပြီး အကဲဆတ်သူ ကိုကိုနှင့် ယုယကြင်နာမှုကို ငတ်မွတ်လိုလားလွန်းသော မြတို့ မည်သို့မည်ပုံ ဆက်ပြီးလက်တွဲကြမည်လဲ..
ကိုကိုသည် မကြာခဏ မြကို လူကြားထဲမှာ ချန်ထားခဲ့တတ်၏.. စကား ကတောက်ကဆဖြစ်ကြကာ စိတ်အလိုမကျလွန်းလာလျှင် တွဲချိတ်ထားသော လက်ကိုဖြုတ်ချလျက် ကိုကို ထွက်သွားလေ့ရှိသည်.. မြသည် မျက်ရည်များဝဲကာ ထူပူကျန်ရစ်ခဲ့ရင်း လူကြားထဲမှာ ဘာလုပ်ရမည်မသိ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး အရှက်ကြီးရှက်လျက်ရှိနေတတ်သည်.. တွဲထားသောလက်ကို ဖြုတ်ချသွားတဲ့အခါတိုင်း မြ၏ ရင်မှာ စူးအောင့်ရခြင်းကို ကိုကိုနားလည်ပေးနိုင်မည်ဟု မထင်ချေ.. ကိုကိုရက်စက်တယ်ဟု မြစွပ်စွဲတိုင်း ကိုကို့မှာ မြကို ပြန်လှန်ရန်တွေ့ချေပဖို့ စကားတွေရှိနေတတ်တာ.. မြသည် အပြစ်ကြီးသူဖြစ်သည်..
ကိုကို့ထက် တခြားတပါးသော ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို မြ အရေးပေးခဲ့မိခြင်းသည် ကိုကို့ကို ဘယ်တော့မှ မပျောက်နိုင်တော့မယ့် စိတ်ဒဏ်ရာကို ပေးခဲ့မိခြင်းမှန်း မြ မသိတတ်ခဲ့.. မြက အရေးတယူခံစားနေသော သေးသေးဖွဲဖွဲကိစ္စများသည် ကိုကို့အတွက် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ကိစ္စများသာဖြစ်ကြောင်း လက်ခံလို့မရနိုင်ခဲ့.. မြမှာ ဆိုက်ကိုရှိတယ်ထင်တယ်ဟု ကိုကိုက မကြာခဏ ဖွင့်ဟဆိုညဉ်းလေ့ရှိသည်.. ထိုအခါတိုင်းမှာ မြသည် ပြုံးမူပြုံးရာဖြင့် ကိုကို့ရှေ့မှာ ဟန်ဆောင်နေရင်း ပြောရက်သူရယ်လို့ စိတ်မှာ ထိခိုက်နာကျင်နေရတတ်သည်..
သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများ၏ ကိစ္စတိုင်းကို ပျာပျာသလဲ စိတ်ပါလက်ပါ ကူညီတတ်သူ ကိုကိုသည် မြ၏ ကိစ္စဝိစ္စများအတွက်တော့ အချိန်မပေးလိုသူတစ်ဦးဖြစ်နေ၏.. ကိုကို လိုက်မပို့ပေးသည့် ကိစ္စတစ်ခုအတွက် သွားလာရင်း ကားတိုက်မှုဖြစ်ရချိန်တွင် မြသည် တဖက်က ကျေနပ်အောင် မြစုထားသည့်ပိုက်ဆံများထဲမှ လျော်ကြေးငွေများ ပေးရင်း ကားမောင်းညံ့သည်ဟု ကိုကိုအပြစ်တင်သမျှကိုလည်း ခံရင်း နောက်ထပ် ကားယူမမောင်းရဲလောက်အောင် စိတ်ညစ်ညူးခဲ့ရသည်.. ထို့နောက် မြသည် အထူးယာဉ်ဘတ်စ်ကားများကို စတင်စီးစပြုလာ၏.. ချိန်းထားသည့်အချိန်အတိုင်း ကွက်တိမရောက်ဘဲ နောက်ကျသည့်အခါတွေ များပြားလာသောအခါ ဘတ်စ်ကားများ၏ ကြန့်ကြာမှု အချိန်ကို ထည့်မတွက်တတ်သည့်အတွက် မြကို ညံ့သည်ဟု ကိုကိုက မှတ်ချက်ချလေသည်..
တစ်ခါတရံ ကိုကိုစွပ်စွဲသမျှတို့ကို ပြန်လှန်ရန်တွေ့ချင်သော်လည်း မြသည် ကိုကိုက အော်ထုတ်လိုက်မှာ သို့မဟုတ် ကိုကိုက လက်ဖြင့်ရွယ်လိုက်မည်ကို မလိုလားနိုင်လွန်းသဖြင့် မျက်လုံးအဝိုင်းသားဖြင့်သာ ပြောသမျှကို ခံလေ့ရှိသည်.. တစ်ခုတော့ တော်သေးသည်မှာ ကိုကိုသည် မပြီးနိုင်မစီးနိုင် အခဲမကျေ မြည်တွန်တောက်တီးနေတတ်သူတော့ မဟုတ်.. ဝုန်းဒိုင်းကျဲ ဒေါသထွက်ပြောဆိုပြီးသောအခါတိုင်း အတေးအမှတ်တို့ ပျောက်ကွယ်သူတစ်ဦးပင်.. ကိုကိုက တကယ်စိတ်ထဲပါလို့မဟုတ်ပါဘူးဟု မြ ဘာသာ အားတင်းရင်း ကိုကို ပြောသမျှစကားလုံးတိုင်းတို့ကို ထိခိုက်နာကျင်နေတတ်ခဲ့သည်.. ထိုသို့ ခံစားရခြင်းတို့သည် မြအဖို့ ဝဋ်လည်ခြင်းတမျိုးလို့လည်း ခံယူထားလေတော့ ယခင်က မြကြောင့် ထိခိုက်နာကျင်ခဲ့ရသူတို့ကို ပြန်လည်ကိုယ်ချင်းစာနာ နားလည်နိုင်လာကာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မုန်းတီးမိတာကလည်း မကြာခဏဖြစ်၏..
မြသည် အိပ်မက်မှ နိုးလာပြီးနောက် ပြန်၍အိပ်မပျော်နိုင်တော့ဘဲ ဟိုဟိုသည်သည်တွေးရင်း ဝမ်းနည်းအားငယ်လာပြန်သည်.. ကိုကို သနားပါတယ်ဟု တွေးစပြုလာ၏.. ကိုကို့ကို ပျော်စေချင်သော စေတနာအပြည့်ဖြစ်ပေမယ့် မြကြောင့် စိတ်တိုရတာ ခဏခဏပဲ.. မြကြောင့် ကိုကို စိတ်ညစ်ရရှာတယ်ဟု ကိုကို့အတွက် ပူလောင်လာသည်.. အပြင်ကမ္ဘာမှာ မြကို စိတ်ဆိုးစိတ်တိုရုံဖြင့် မလုံလောက်သေးဘဲ အိပ်မက်ထဲမှာထိ ကိုကိုမျက်နှာညိုခြင်းကို ယခင်ကတော့ မလိုလားတတ်ခဲ့သော်လည်း ယခုတော့ အိပ်မက်ထဲမှာပါ ကိုကို ဆူမှာကို ခံချင်လာပြန်သည်.. ခက်တာက မြသည် သူများနှင့်မတူ.. ကိုယ်မကြိုက်မနှစ်သက်သော အိပ်မက်တစ်ခု မက်လာခါနီးတွင် သိစိတ်ဖြင့် နိုးလာတတ်သူဖြစ်နေလေတော့ အိပ်ရေးလည်း ဘယ်တော့မှ ဝသည်မရှိဘဲ အိပ်မက်တွေ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းမက်ရင်း မနက်လင်းရတတ်သူဖြစ်နေလေသည်.. ကိုကို ဆူပြောခါနီး မြ နိုးလာမိရင် ဘယ့်နှယ့်လုပ်ပါ့မလဲ..
အိပ်မက်ထဲမှာ ကိုကို အော်ဟစ်သမျှကို ခံယူဖို့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ စဉ်းစားရင်း မြသည် အကြံကောင်းရကာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သဘောကျ ကျေနပ်သွား၏.. အိပ်မပျော်လျှင်သောက်ရန်ဟု ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပေးထားသော်လည်း အိပ်မက်မကြိုက်လျှင် နိုးလာဖို့ မတတ်နိုင်မည်စိုးသဖြင့် ဘယ်တော့မှ မတို့ထိသော အိပ်ဆေးပုလင်းကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာဖွေလိုက်ပြီး ရေတစ်ပုလင်းအသစ်ယူရင်း အိပ်ရာနား ပြန်လာခဲ့လိုက်သည်.. အိပ်မက်ကနေ မနိုးဘဲ ဆက်အိပ်နေနိုင်အောင် ကြံဆောင်နိုင်သည့်အတွက် မြ ဥာဏ်ကောင်းသားပဲလို့များ ကိုကို ချီးကျူးမလားမသိ.. ထိုသို့သော ချိုသာသော ကြင်နာသော ချီးကျူးစကားပြောသည့် အိပ်မက်များ မက်မည်ဆိုလျှင်လည်း အကောင်းသားပင်..
မြသည် ဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားဖြင့် အိပ်ဆေးလုံးလေးများကို တဖြည်းဖြည်းချင်း မျိုချနေရင်း ရေတစ်ပုလင်းလုံး အသစ်ကုန်ကာ ဗိုက်ပြည့်တင်းလာချိန်မှပင် စောင်အသာခြုံကာ လှဲအိပ်လိုက်သည်.. အိပ်ဆေးပုလင်းခွံကလေးကို တိုက်လိုက်မိသဖြင့် ပြုတ်ကျသွားသော်လည်း မကောက်နိုင်တော့ဘဲ မျက်လုံးများမှေးစင်းလာလျက် မီးခလုတ်ကို မနည်းစမ်းကာ ပိတ်လိုက်ရသည်..
ထို့နောက် မြ၏ ကမ္ဘာမှာ အမျိုးမျိုးစုံလင်သော အိပ်မက်တို့ ရှည်လျားစွာ မက်စပြုလာလေတော့သည်..
မြရဲ့ကမ္ဘာ Reviewed by NangNyi on 4:51 PM Rating: 5
အန်တီချမ်း March 22, 2011 3:15 PM
အတ္တိသရဝုတ္တိ တွေသိပ်များတယ် သိပ်နွဲ့တယ်
နန်းညီ နဲ့ သိပ်မတူဘူး
Anonymous March 31, 2011 7:42 AM
Dagon Nang Nyi phyit lar p
Tayar tot ma kaung buu, Kyut lout soataw pae :D
This Sweater Dress is Perfect for Fall
ဟင်္သာ ဂဠုန်နဲ့ ကိန္နရီ ကိန္နရာ
Ciao ဆိုတာ ဘာမှ မဟုတ်ပါ.. စိတ်ထဲမရှင်းမရှင်းဖြစ်တာ မေးမိတာ..း) ဒီမှာ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဟင်္သာ ဂဠုန်နဲ့ ကိန္နရီ ကိန္နရာ.. Scan တော့သိပ်မကောင်းလှပေ...
မြန်မာ့ရိုးရာပန်းချီပုံများကို တင်တုန်းက နဂါးပုံတွေ မပါသွားဘူး.. အဲ့မှာ ချစ်သူငယ်ချင်း P က "where are dragons man? i wanna see dragons....
Ciao ဆိုတာ ဘာလဲ... The word ciao (pronounced "chaow" /tʃao/) is an informal Italian verbal salutation or greeting, meaning either...
ဦးပုည တေးထပ်များ ၁
ဦးပုညတေးထပ်တွေ စိတ်ကူးချိုချိုက ပြန်ထုတ်တဲ့ စာအုပ် ရထားတယ်.. ပြန်ရိုက်တင်ပေးဖို့ စိတ်ကူးပါတယ်.. ခုလောလောဆယ် သဘောကျတဲ့ ၃ ပုဒ် အရင် တင်ပေးလို...